Iibinta Marijuana Iyo Ruuxyadu Way Sii Kacayaan Markay Dadku Ka Go'doomaan Coronavirus • Dawooyinka Inc.eu
Mareykanka - Isgoyska caalamiga ah ee 'COVID-19' iyo shirkadaha marijuana ee Mareykanka, laba sheeko oo kala duwan ayaa ka soo ifbaxay.
Qeybaha sare, arrimuhu uma muuqdaan kuwo wanaagsan marka loo eego ciyaartoyda waaweyn ee xashiishka. Istaraatijiyadaha kobaca buuxa ayaa la tirtiray sababtoo ah khalkhalka silsiladaha iyo hoos u dhaca qiimeynta suuqa saamiyada. Kordhinta raasumaalku wuxuu ahaa waayadan dambe Shirkadaha marijuana iyo maalgashadeyaashu aad umay xasilin maalgashiga ilaa uu suuqa xasiliyay.
Dhinaca kale, farmasiyada iyo dukaamada marijuana ee Ameerika ma caban karaan. Dhowr dukaan oo ku yaal Washington ayaa dhowaan lala xiriiray si ay si fiican u fahmaan sida coronavirus-ku u saameynayo iibka. Qof daggan Snohomish County, Washington, ayaa helay tijaabadii ugu horreysay ee wanaagsan ee cudurka loo yaqaan 'coronavirus' ee Mareykanka, qaarna waxay yiraahdaan gobolku wuxuu la ildaran yahay cudurradii ugu xumaa ee COVID-19 ee dalka ka dillaaca.
Dadku waxay ku qulqulayaan xashiishadda waqtiyadan
Midkoodna taas kama joojin dadka deggan inay kaydiso xashiishka.
Tedd Wetherbee, oo ah milkiilaha silsiladda The Gallery ee Tacoma ayaa yidhi "Dhageyso, markay dadku dareemaan raaxo la'aan wax la mid ah Cudurka dilaaga ah ee loo yaqaan 'COVID-19 corona virus dillaaca, waxay raadinayaan hubin dhab ah oo ay ku maareeyaan walaaca iyo walaaca ay qabaan.' Maxay ka fiican tahay in la sameeyo taas marka loo eego kansarka? Iibkeennii waa dhammaaday waana ku faraxsanahay inaan gacan ka geysan karno inaan dadka ka dhigno kuwa ka roon waalida ka dhaceysa agagaarkooda. “
Dukaammada ayaa qaaday taxaddar dheeraad ah oo lagu xakameynayo faafitaanka fayraska iyadoo wali ay siinayso xashiishadda dadka deggan. Silsilada tafaariiqda ee Gallery ee Mareykanka, shaqaaluhu waxay sameeyeen xarun istaagis oo jeermis-dilis ah oo laga heli karo dhammaan goobahooda si loo hubiyo amniga macaamilka iyo naftooda.
Daraasad cusub ayaa gacan ka geysan doonta sharaxida sababta iibka marijuana ay kor usii kacayso. Wada-hawlgalayaasha MKM ayaa leh waxay sameeyeen baaritaan oo ka mid ah 1.000 isticmaaleyaasha xashiishadda ah iyo 863 qof oo aalkolo isticmaala, waxayna ogaadeen in labadan "xumaan" ay yihiin kuwa inta badan loo isticmaalo is-daaweyn xilliyadan dhibku jiro.
Sida laga soo xigtay falanqeeyaha MKM Bill Kirk, dadka isticmaala marijuana waxay u badan tahay inay is karantiibaan ama ay ku soo ururaan kooxo yar oo keliya marka ay cunayaan haramaha, halka kuwa khamriga caba ay door bidayaan kooxo waaweyn. Maaddaama khubaro caafimaad iyo hoggaamiyeyaal qaran ay riixayaan fogaanta bulshada si loo xaddido faafitaanka cudurka 'coronavirus', dadka adduunka oo dhami waxay noqon doonaan kuwo ka go'doon badan sidii caadiga ahayd toddobaadyada soo socda.
Markaad keli tahay, xashiishadda ayaa ah dawada la doorto. Waxyaabaha kiciya kooxaha waaweyn ama dadka cusub waa khamri, ”Kirk ayaa u sheegay maalgashadayaasha Business Daily. "Waxaan rumeysanahay in waxqabad kasta oo guriga-ka-kordha ah oo lala xiriiriyo COVID-19 ay soo dadajin doonto in loo beddelo saamiga khamriga xashiishka
Qaar baa diida. Kooxuhu mar dambe iskama ururin karaan baararka ku yaal bartamaha magaalada ama meelaha ballaaran ee gudaha ah xilligan, laakiin dadku weli waxay u qulqulaan khamriga maanta. Waxay soo iibsadaan khamrigooda waxayna hada kaliya ku keydisaa jinniyo tiro badan oo ah dukaamada khamriga ee maxalliga ah, ayuu yiri Marques Warren, oo ah agaasimaha Suuqa Magaalada Seattle.
"Iibinta cabitaanku guud ahaan wali way sii kordhayaan, laakiin kooxo macaamiil gaar ah ayaa ka noqday". “Inta badan si muuqata, iibka shirkadaha ayaa si aad ah hoos ugu dhacay maadaama ganacsiyo badan oo Seattle ku yaal (halka ay ku yaalliin Amazon, Google iyo Facebook) ay si lama filaan ah u xirmeen bisha Maarso. Geynteena guriga iyo u wareejinta goobaha jireed ayaa sii kordhaya. ”
Ilaha waxaa ka mid ah TheCut (EN), TheFreshToast (EN)
AmericacannabisFayras CoronacaafimaadkaMaraykankaAdduunka oo dhan
Madaxweyne Trump wuxuu weydiisanayaa malaayiin si uu u sharciyeeyo CBD iyo hemp
Hemp iyo CBD waxay ku helaan dareenka hay'adaha federaalka qorshe miisaaniyadeed 2021 oo dhammaaday ...
7 siyaabood oo si fudud loogu koriyo xashiishadda hydroponic
Tan iyo markii ay soo baxday xashiishadda ayaa qarxday iibinta, dad badan ayaa ka fikiraya ...
Isticmaalka marijuana culus wuxuu laba jibaari karaa halista istaroogga ee dadka dhallin-yarada ah, daraasad ayaa soo jeedisay
Kuwa had iyo jeer isticmaala marijuana sidoo kale caba sigaarka ama sigaarka elektarooniga ah, halistu wali ...